Midowga Musharaxiinta Oo Faahfaahiyay Qodobadii ay kula Heshiiyeen Rooble. AwdalMedia Awdalmedia Midowga Musharaxiinta Oo Faahfaahiyay Qodobadii ay kula Heshiiyeen Rooble.
Golaha Midowga Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta kulan la yeeshay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kala hadlay boobka ka taagan doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo bulshada Soomaaliyeed ay Cabasho xoog leh ka muujiyeen.
Afhayeenka Midowga Musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in ay go’aansadeen in Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ay siiyaan fursad uu ku saxo khalaadaadkii baahsanaa ee ka dhacay doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Musharax Madaxweyne Daahir waxaa uu caddeeyay in Midowga Musharaxiinta aysan marnaba ku qanci doonin wixii dhacay iyo dadkii loo diiday xaqii ay u laahaayeen in ay wax doortaan iyagana la doorto ilaa ay ka helayaan Caddaalad buuxda.
“Qof kasta oo dulmana ah waa inuu caddaalad helaa caddaaladdaasna waxay ku imaaneysaa in la saxo falaadkii iyo hannaankii qaawanaa ee boobka lagu sameeyay doorashooyinka, waxaan rabnaa inaa Ra’iisul Wasaaraha fursad u siino inuu la kulmo Golaha Wadatashiga Qaran si wax loo saxo”Ayuu yiri Musharax Madaxweyne Dahir Mohamud Gelle.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan kulamada ay la yeelanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada si looga hadlo badbaadinta dalka.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhankiisa maanta Caddeeyay in uu qirsan yahay in boob loo geystay kuraas ka mid ah golaha Shacabka.